Ciidamo ka tirsan AMISOM oo Markii ugu horeysay la geeyay dhuusamareeb Iyo Xog Buuxda oo laga Helay? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ciidamo ka tirsan AMISOM oo Markii ugu horeysay la geeyay dhuusamareeb Iyo...
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo Markii ugu horeysay la geeyay dhuusamareeb Iyo Xog Buuxda oo laga Helay?
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Dhuusamareeb ee Xaruta Gobalka Galgaduud ee Soomaaliya ayaa soo sheegayo in markii ugu horeysay Ciidamo ka tirsan Howlgalka Midowga Africa ee AMISOM lagu arkayo Bartamaha magaalada waxaana halkaasi ka baxaya Ciidamo ka tirsan Ethiopia oo aan ka diiwaan gashaneen Howlgalka AMISOM.
Qaar ka mid ah Shacabka ku nool Magaalada dhuusamareeb ayaa Warbaahinta u sheegay in ay Magaalada ka baxeen Ciidanka Ethiopia ee mudada dheer ku sugnaa gobalka gaar ahaan Magaaalada Dhuusamareeb islamarkaana ay soo gaareen Ciidan kale AMISOM ah.
Saraakiisha Amaanka maamulka Ahlusunna ayaa sidoo kale Warbaahinta u xaqiijiyay in Ciidankii Ethiopia ee ka amar qaadanayay Maamulka Ahlusunna magaalada laga saaray laguna badalay Ciidan kale oo ka socda Dalka Ethiopia lkn ka amar qaata Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.